ရှမ်းပြည်နယ် – Department of Medical Service
14/12/2020 29/05/2019 by Author 2
14/12/2020 29/04/2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဖုန်းနံပါတ် – ၀၈၄-၅၁၄၈၆ – ၀၈၄-၅၁၇၅၇ Fax No. – ၀၈၄-၅၁၄၈၆ Official E mail address – dr.shwewin123@gmail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – Medical Surgical OG Child Ortho Dental ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄. ၁)General OPD Timetable နေ့စဉ်နံနက်(၈: ဝဝ မှ ၁၂:၀၀)ထိ နေ့လည်(၁၄:၀၀ မှ ၁၆:ဝဝ)နာရီထိ အရေးပေါ်လူနာများအား အချိန်ကန့်သတ်မှုမရှိကြည့်ရူကုသပေးပါသည်။ (၄. ၂)Specialist OPD Timetable … Read more
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ ဆေးရုံအုပ်ကြီးခန်း – ၀၈၄ – ၂၂၅၁၄ ဆေးရုံကြီးရုံးခန်း – ၀၈၄ – ၂၁၅၁၁ Official E mail – kthospital 2003 @gmail ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – ၁။ခွဲစိတ်ဘာသာရပ် ၂။ဆေးပညာဘာသာရပ် ၃။ကလေးအထူးကုဘာသာရပ် ၄။သားဖွားမီးယပ်ဘာသာရပ် ၅။မေ့ဆေးဘာသာရပ် ၆။အရိုးအထူးကုဘာသာရပ် ၇။မျက်စိအထူးကုဘာသာရပ် ၈။နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်းအထူးကုဘာသာရပ် ၉။ဓါတ်မှန်ဘာသာရပ် ၁၀။ရောဂါဗေဒဘာသာရပ် ၁၁။စိတ်အထူးကုဘာသာရပ် ၁၂။သွားရောဂါအထူးကုဘာသာရပ် ၁၃။အကြောအဆစ်ဘာသာရပ် ၁၄။မှုခင်းရေးရာဆေးပညာဘာသာရပ် ၁၅။အဏုဇီ၀ဗေဒဘာစာရပ် ၁၆။ဉီးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဘာသာရပ် ၁၇။ဉီးနှောက်နှင့်အာရုံကြောခွဲစိတ်ဘာသာရပ် ၁၈။ကိုယ်ကာယပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဘာသာရပ် ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄-၁) General OPD … Read more